सडकमा पार्किङ गरिएकाे गृहका सह–सचिवको गाडीमा लक, ट्राफिकलाइ उल्टै धम्की | mulkhabar.com
June 26, 2019 | 1:31 pm 47 Hits
काठमाडौं, ११ असार । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट खटिएका प्रहरी जवानले गृह मन्त्रालयका सह–सचिव रामकृष्ण सुवेदीको गाडीमा लक लगाएका छन् ।
अनाधिकृत रुपमा सिंहदरबारको पूर्वी गेट अगाडि पार्किङ गरेर राखेका वेला सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीमा लक लगाइएको हो । सुवेदी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत हुन् ।
महाशाखाका प्रमुख वसन्त लामालाई आफूलाई घटनाबारे जानकारी आएको बताउँदै सोधपुछ भइरहेको बताए । प्रहरीका अनुसार पार्किङ गर्न निषेध गरिएको ठाउँमा बा २ झ ३४६ नम्बरको गाडी राखेर सुवेदी खाना खान निस्एिका थिए ।
प्रत्यक्षदर्शीका यज्ञम्बर श्रेष्ठका अनुसार लक लगाएपछि कर्मचारीले ट्राफिक जवानलाई धम्क्याएका थिए ।
‘कानुन पालना गराउने निकायले कानुनको रखवाली गर्दै गरेका प्रहरी दाइलाई दवाब दिएर कारवाही फिर्ता गराउन खोज्ने ? ’, श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्, ‘त्यति मात्रै होइन, फोनमार्फत कुरा गराएर ती प्रहरीलाई नै तर्साउन खोज्ने ? ’
उनले ती कर्मचारीको सरुवा गरिने आशंका गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘होसियार हामीले हेरी राखेका छौं ।’
आज बिहानै सिंहदरबार पूर्वी गेटअगाडि पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरेको गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्यो । चिट काटिएका गाडीमध्येमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताको गाडी पनि थियो । चिट काटिरहेका ट्राफिक प्रहरी र गाडीको तस्बिर खिच्ने यज्ञम्वर श्रेष्ठले देखेको त्यो दृश्यः
अनामनगर पूर्वी गेट अगाडिको सडकमा सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी पार्किङ गरिएका थिए । अनधिकृत रुपमा पार्किङ गरिएका गाडीको ह्वीलमा लक लगाइरहेका थिए ट्राफिक प्रहरी । त्यसरी अनधिकृत रुपमा पार्किङ गरिएका गाडीमा गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको गाडी पनि रहेछ ।
उनी गाडी सडक किनारमा पार्किङ गरेर खाना खान गएका रहेछन् ।
ट्राफिक प्रहरीले गाडी लक गरेको थाहा पाएपछि प्रवक्ता सुवेदी आफ्ना चालकसहित गाडी भएको स्थानमा आए । ढाका टोपीमा सजिएका प्रवक्ता सुवेदीले आफू गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता हुँ भन्दै ट्राफिक प्रहरीलाई चिट नकाट्न अनुरोध गरे ।
तर, ट्राफिक प्रहरीले गाडीका कागजपत्र मागे । कागजपत्र माग गरेपछि प्रवक्ताका सवारी चालकले आफ्नो गाडी गृह मन्त्रालयको गाडी हो भन्दै ट्राफिक प्रहरीलाई सम्झाउन खोजे । तर, ट्राफिक प्रहरीले गाडीको ह्वीलमा लक लगाइसकेका थिए । उनले गाडीको कागजपत्र नल्याउँदासम्म गाडी नछाड्ने अड्डी कसे ।
त्यसपछि प्रवक्ताले कतै फोन गरे । प्रवक्ताले फोन गर्ने समयमा पनि उनका सवारी चालक ट्राफिक प्रहरीलाई गाडी छाड्न भनिरहेका थिए । यतिन्जेलसम्म त्यहाँ टन्नै मान्छे पनि जम्मा भइसकेका थिए ।
यस्तैमा मैले गाडीको फोटो खिच्न खोजें । प्रवक्ताका सवारी चालकले किन फोटो खिचेको भन्दै मलाई पनि थर्काए ।
प्रवक्ताले फोन गरेपछि सिभिल डेुसमा वाकीटाकी बोेकेका एक जना मान्छे आए । उनले सवारी चालकको हातमा कागजपत्र दिए । त्यसपछि ती सिभिल ड्रेस लगाएका मान्छेले कतै फोन लगाए र एकछिन आफूले कुरा गरेर ट्राफिक प्रहरीलाई फोन दिए ।
फोनमा ट्राफिक प्रहरीले धेरै कुरा त गरेनन् तर उनको अनुहार भने अँध्यारो भइसकेको थियो । सिभिल ड्रेसमा आएका मान्छेले ट्राफिक प्रहरीलाई नबुझी र नसोची गाडी लक नगर्नू भन्दै थर्काए पनि ।
त्यसपछि उनले गाडीको ह्वीलमा लगाएको लक खोले । गाडीको लक खोलेपछि प्रवक्ता मुर्मुरिँदै गाडी चढेर गए । प्रवक्ता गएपछि ट्राफिक प्रहरी भन्दै थिए, ‘म त काम गरेर खाने मान्छे हो, जहाँ सरुवा गरे पनि के भो र ?’
यी सब दबाबका बाबजुद पनि ती ट्राफिक प्रहरीले १ हजार रुपैयाँको चिट भने काटेकाे खबर
अनलाइनखबर र शिलापत्रमा छ ।